Vuelio: Mgbasa ozi mmekọrịta gị na Influencer | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 8, 2020 Na Tọzdee, Septemba 8, 2020 Douglas Karr
Mmekọrịta ọha na eze agbanweela nke ukwuu na mgbawa nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na oge dijitalụ. Agakwaghị ezuru ya ịwụnye ụzọ ole na ole wee chịkọta ndepụta kwa ọnwa nke aha gị. Taa, ọkachamara mmekọrịta ọha na eze nke oge a ga-ejikwa ndepụta na-eto eto nke ndị na-eme ihe ike na mbipụta, wee gosipụta mmetụta ha na-enwe na ụdị.
Ngwakọta ngwanrọ PR sitere na nkesa mgbasa ozi dị mfe maka usoro mmekọrịta mmekọrịta nke oge a nke nwere ike inyere ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze aka, chọta, nkwukọrịta, gbanye akpaaka, ma tụọ mmetụta ha na-enwe n'aha ndị ahịa ha.
Vuelio bụ ngwanrọ ngwanrọ PR nke gụnyere akụkụ niile nke mmekọrịta ọhaneze ọgbara ọhụrụ. Ghọta onye dị mkpa, otu kachasị mma iji tinye ha n'ọrụ wee zipụ ọdịnaya, nyochaa nsonaazụ, tụọ mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta, ma nyochaa ịdị irè, ha niile n'otu ebe.
Atụmatụ Vuelio gụnyere
Ebe nchekwa data Media - Pịa n'ime ndepụta mgbasa ozi kachasị ike nke ụlọ ọrụ PR. Site na ịnweta ihe karịrị otu nde ndị nta akụkọ na ndị na-eme ihe ike site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 200, ị nwere ike ijikọ ndị kachasị mkpa na akụkọ gị, isiokwu gị, ma ọ bụ nzukọ gị.
Nlekota oru - Ghọta otu esi enweta akụkọ gị site n'aka ndị nta akụkọ na ndị nwere mmetụta iji ige ntị dị egwu na nyocha. Nlekota na enye gi ohere isoro nkwusi na mgbasa ozi gbasaa na mgbasaozi, mbipụta, ntaneti na soshal midia.
Nkesa Mgbasa Ozi - Mfe ndị mgbasa ozi weghaara ndị mmadụ. Zipu akụkọ multimedia ozugbo na waya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, engines ọchụchọ ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Mgbe ahụ soro, nyochaa, ma mụta site na nsonaazụ gị n'oge.
Nyocha gbasara mgbasa ozi - Nyochaa otu esi nweta akụkọ gị ma nweta nghọta bara uru iji mee ka nkwukọrịta n'ọdịnihu rụọ ọrụ ka mma. Hụ ozi, ọdịnaya, na ọwa na-arụ ọrụ (na ndị na-anaghị arụ ọrụ) na ndị isi akụkọ gị na ndị nrụ ọrụ. Nweta nghọta banyere otu esi erute ndị na-ege gị ntị ntị nke ọma, kwalite ROI, ma melite aha ọma.
Roomlọ Akụkọ n'Onlinentanet - Mee ka ọdịnaya gị dị mfe maka ndị nta akụkọ, ndị nwere oke, na ndị na-emetụta ihe na ntanetị mgbasa ozi n'ịntanetị. Mepụta ebipụta mbipụta akụkọ ngwa ngwa, onyonyo, na ozi nkwado ka ị na-enweta data ịchọrọ iji melite arụmọrụ nke ihe niile ị mepụtara.
kwaaji - Mepụta ihe ngosi mara mma maka ndị na - ekenye gị otu esi kọọ akụkọ gị na sekọnd. Curate mkpuchi akụkọ, ọrụ mmekọrịta, vidiyo, na obere vidiyo iji mepụta ngosi ngosi mgbasa ozi na sekọnd.
Nlekọta FOI - Mfe jikwaa gị niile Freedom nke Ozi usoro. Debe usoro oge, usoro nhazi, ma mepụta akụkọ ọsọ ọsọ na ọnụ ọgụgụ na ụdị arịrịọ, dị ka Iwu FOI 2000 chọrọ.
Njikwa ndị nwere oke - Jikwaa njikọ ndị dị mkpa yana ụlọ ọrụ njikwa kọntaktị dị mfe. Debe nkwukọrịta na ndị nta akụkọ na ndị na - eme ihe ike n'ofe otu gị site na ịnwe otu ebe nrụọrụ weebụ na - achịkwa nke na - akọwa mmekọrịta ọ bụla n'etiti ndị otu gị na ndị ọrụ metụtara ya
Njikwa Mmekọrịta Mgbasa Ozi - Streamline gị dum nkwukọrịta atụmatụ na a centralized mkpọsa center. Vuelia's media management software na-azọpụta gị oge site n'ime ka ọ dị mfe ịhazi, kesaa, na mkpesa na ihe niile ndị otu gị na-eme, yana nsuso na-akpaghị aka, ntinye email, yana ngwa akụkọ na nyocha.
Kpọtụrụ Vuelio maka ịnye ọnụahịa na Ozi
Tags: nnwere onwe nke ozinchekwa datanyochaa mgbasa ozinjikwa mmekọrịta ndị ọrụ mgbasa ozinkesa ozinkesa mgbasa oziime ụlọ akwụkwọ akụkọ n'ịntanetịpitch ikpo okwupr n'elu ikpo okwupịa mgbasa nkesammekọrịta ọha na ezenjikwa ndi ozovuelio